Xiaomi Mi Band 3 dia mivarotra singa iray tapitrisa any India | Androidsis
Xiaomi dia iray amin'ireo marika malaza indrindra amin'ny sehatry ny akanjo. Ny fehin-tànany farany indrindra dia ny Xiaomi Mi Band 3, izay antenaina amin'ity taona ity dia hanana mpandimby, izay manomboka tonga ny antsipirihany amin'ireo herinandro ireo. Hatramin'ny nanombohany teo amin'ny tsena dia fahombiazana vaovao ho an'ny marika sinoa. Izy io koa dia mivarotra tsara eo amin'ny tsenan'i India, araka ny nambaran'ny orinasa tenany ihany.
Satria izy ireo namidy singa iray tapitrisa amin'ity Xiaomi Mi Band 3 any India ity hatramin'ny nanombohany. Fahombiazana vaovao ho an'ny fehin-tànana, izay anaovan'ny sasany varotra tsara hatramin'ny nanombohany tamina magazay taona lasa. Noho izany dia hita taratra ny lazan'ny marika sinoa amin'ity sehatra ity.
India dia nanjary iray amin'ireo tsena lehibe indrindra amin'ny marika. Izy io dia iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra amin'ny sehatry ny smartphone. Zavatra iray izay mitranga koa eo amin'ny sehatry ny akanjo, araka ny hitantsika ankehitriny amin'ny varotra tsara ananan'ity Xiaomi Mi Band 3 ity.
Varotra izay tratra tao anatin'ny enim-bolana, izay faharetan'ny fotoana namarotana ilay fehin-tànana tany India. Ka ny fanekena azy dia tsara. Ka ny marika dia mitohy amin'ny endriny tsara amin'ity lafiny ity. Satria mihazona tsara ny varotra eo amin'ny tsena, mitombo amin'ny tranga maro.
Mandritra izany fotoana izany, antenaina ho tonga amin'ity taona ity ny fehin-tànana vaovao. Ny Xiaomi Mi Band 3 dia efa nanolotra fanovana maro, indrindra amin'ny lafiny famolavolana. Ka andrasana fatratra ity taranaka fahefatra amin'ny bracelet ity, satria hahaliana ny mahita ny fomba hanaovan'ny marika marika amin'ity lafiny ity.
Hihaino tsara ny famoahana ny taranany fahefatra isika. Nandritra izay fotoana izay, Hitanay ny fomba nahombiazan'ity Xiaomi Mi Band 3 ity ho an'ny marika. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana angon-drakitra momba ny varotra an'izao tontolo izao isika, na dia efa an-tapitrisany aza izy ireo. Manantena izahay fa hahafantatra bebe kokoa momba izany vetivety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mahatratra singa iray tapitrisa amidy any India
Ahoana ny fomba hisorohana ny efijery findainao Android tsy ho faty ho azy
Nambara ny vidin'ny Nubia Alpha